Shiinaha Soosaarayaasha Tiknoolajiyadda Nuugista Lithium Bromide | SHUANGLIANG ECO-ENERGY
Nooca Tooska ah ee Fired
Nooca Biyaha Kulul
Nooca Gaaska Qiiqa
Nuugista Heerka Bamka
Qaadista Magnetic Centrifugal Chiller
Nooca Qaboojiyaha / Heerka Bamka ee biyaha lagu qaboojiyo
Deep Hole Butt Alxanka Heat Exchanger
Is-beddelka Heat-ka Is-beddelka Kuleylka ah
Sheybaarka Labaad Xaashida Kala Beddelka
Beddelaha Kuleylka Amniga
Isweydaarsiga Kuleylka ee TEMA
Inter Stage meeldhexaadka ah ee kombaresarada iyo cusboonaysiinta kululeeyaha
Nidaamka qaboojinta qalalan ee xakamaynta birta sirdoonka ah
Nidaamka Qaboojiyaha Hawada ee Toosan (ACC)
Munaaradda sibidhka aan tooska ahayn habka qaboojinta qalalan
Nidaamka qaboojinta qalalan ee biyaha lagu keydiyo & hoos loo dhigo
Teknolojiyadda Nuugista Lithium Bromide
Shuangliang waxay leedahay in kabadan 30,000 oo ah keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka ee howlgalka xasilloon adduunka oo idil, oo loogu qaybiyey dhinacyo kala duwan sida ganacsiga, tas-hiilaadka dadweynaha, warshadaha, waxsoosaarkana waxaa loo dhoofiyaa in kabadan 100 dal iyo gobollada adduunka.
Ku dhowaad 40 sano oo waayo aragnimo ah R&D iyo soo saarista qalabka keydinta tamarta
Qalabka qaboojiyaha / qalabka bamka kuleylka ee ballaaran R&D iyo saldhig wax soo saar
Kaqeybgaleha sameynta shaaha Shiinaha ee 'chiller / bamka kuleylka' heer qaran
Cidhiidhi-hawo sare iyo COP hoggaamineed warshadeed
Shuangliang waxay leedahay wax ka badan 30,000 qalabka keydinta iyo ilaalinta deegaanka ee howlgalka xasilloon adduunka oo idil, oo loogu qaybiyey dhinacyo kala duwan sida ganacsiga, tas-hiilaadka dadweynaha, warshadaha, iyo wax soo saarka ayaa loo dhoofiyaa in ka badan 100 dalalka iyo gobollada adduunka.
Teknolojiyada hogaamisa ayaa loo isticmaalay in lagu hubiyo
waxqabadka sare ee chiller
1. Laba Bambooyin iyo bilaa buufin biiyaha
Nidaamka Bidix-Dhexe-Midig: Nuugista-uumi-nuugista;
Nuugaya saxanbo daadanaya halkii ay ka buuxin lahaayeen aaladaha lagu buufiyo;
Ka fogow hoos u dhaca awoodda qaboojinta;
Ku dheeree nolosha qalliinka chiller.
2. Qeybinta Qaboojiyaha oo ku daadinaya Suxuunta Uvaporator-ka
Isticmaalka hufan ee aagga wareejinta kuleylka;
Iska yaree dhumucda filimka dareeraha ah;
Hagaajinta waxtarka hawlgalka;
Iska yaree isticmaalka tamarta ee bamka qaboojiyaha.
3. Tubooyinka Tayada Sare leh iyo Qabanqaabinta Qulqulka socodka ee Evaporator
Hubso xitaa qaybinta saamaynta wareejinta kuleylka;
In kor loo qaado waxtarka gudbinta kuleylka.
4. Teknolojiyada Wareejinta Kuleylka
Hubso hawlgal nabdoon iyo wareejinta nolosha;
Waxtarka wareejinta kuleylka sare ee 93.5%.
5. Teknolojiyadda Ka-hortagga Qaboojinta
Tuubooyinka uumi-baxayaasha ayaa laga ilaaliyaa qabowga. Waxaa lagu gartaa iyada oo laga soo ururinayo biyaha qaboojiyaha hawo-qabooraha qolka hoose ee uumi-baxayaasha, ka dibna loo shubo taarikada daadanaya. Sidaa awgeed hawsha qaboojinta ee qaboojiyaha isla markiiba waa la joojin doonaa haddii mashiinka qaboojiyaha la demiyo.
6. Qulqulka Serial ee Xalka
Ka xor ah crystallization iyo yaraynta daxalka;
Hagaajinta kalsoonida oo xaqiiji xakamaynta saxda ah ee chiller.
7. Nidaamka Nadiifinta Gaaska Aan La Koobikarin
Meelaha hawada lagu rakibo ee qalabka wax lagu nadiifiyo ayaa lagu diyaariyey gudaha cutubka si loo hubiyo waxqabadka nuugista hawada.
8. Nidaamka Gaaska Gaaska Gaaska Aan-Uumiga Laheyn
Xakamee bilowga iyo xirida waalka 'solenoid valve' kaas oo ay dhaqaajiso cadaadiska sare iyo goobaha cadaadiska hoose ee qalabka otomaatigga ah, sidaa darteed bilowga / joojinta otomaatiga ee faakiyuumka iyo dheecaanka gaaska ayaa la ogaaday.
Nidaamka kormeerka Remote-ka ee SL waxaa lagu dhisay iyadoo lagu saleynayo server-yada gudaha ee Shuangliang, adeegsadayaashuna si fudud ayey u booqan karaan iyaga oo adeegsanaya websaydh leh koontada saxda ah ee diiwaangashan iyo lambarka sirta ah si ay u eegaan macluumaadka chiller.
Hawlaha: xog aruurinta, kormeerka qadka, keydinta xogta iyo maaraynta, falanqaynta xogta iyo ogaanshaha khabiirka, digniinta ugu horeysa ee cilada iyo ogeysiinta digniinta.
Dhamaan tikniyoolajiyaddan shatiga leh iyo kuwa horumarsan waxay howlgalka ka dhigayaan mid hufan, la isku halleyn karo oo fudud.
Hore: biyo keydinta & tuubista hoos u dhigista nidaamka qaboojinta qalalan
Xiga: Electric Chiller iyo Teknoolajiyadda Soo saarida kuleylka
Chiller Nuugista Bromide
Nuuga Lithium Bromide Heat saar
Teknolojiyada Keydinta Biyaha Hawada
Electric Chiller iyo Teknoolajiyadda Soo saarida kuleylka
Nidaamka Kala Wareejinta Kuleylka Karti-Sare